Blogger of this week : Ramesh Khatri - MeroReport
Blogger of this week : Ramesh Khatri
सिरुटार भक्तपुर निवासी रमेश खत्री विविएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनयनरत छन् । उनी २ वर्षदेखि नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको सिस्टम डिपार्टमेन्टमा ल्याब असिस्टेन्टको रुपमा कार्यरत छन् । घुम्न र लेख्न मन पराउने रमेश यस साताको ब्लगर बन्न सफल भएका छन ।प्रस्तुत छ उनीसितको छोटो कुराकानीः
सर्वप्रथम मेरोरिपोर्टको साताको ब्लगर बन्नु भएकोमा यहाँलाई बधाइ । साताको ब्लगर हुनुभएकोमा यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेकोछ ?
धन्यवाद, मेरोरिपोर्टमा साताको ब्लगर भएकोमा मलाई खुशी लागेको छ । यसले मलाई लेख्नको लागि अझ धेरै प्रेरणा दिनेछ ।
तपाईंले मेरोरिपोर्टमा निरन्तर लेखी रहनुभएको छ ? मेरोरिपोर्टको बारेमा तपाईंको के धारणा छ ?
मैले मेरोरिपोर्टमा सदस्य बनेको करिब २ हप्ता जति भयो । केहि समय अगाडी मैले एउटा कथा पोस्ट गरेको थिएँ, यसलाई मैले निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छु। मेरोरिपोर्टले म जस्ता नयाँ ब्लगरहरुलाई सिकाउने, तथा विभिन्न नयाँ रिपोर्टहरुको प्रस्तुतिको पाटो मन परेको छ । यसले लेख्न मन पराउनेहरुलाई लेख्नको लागि ठाउँ पनि दिएको छ ।
अब तपाईंको ब्लगिङको इतिहासको कुरा गरौँ । तपाईंले कहिले देखी ब्लगिङ सुरु गर्नु भयो ? र किन ब्लगिङ सुरु गर्नु भयो ?
मैले ब्लग लेख्न थालेको धेरै भएको छैन । २०१० को अन्त्यतिरदेखि लेख्न थालेको हुँ ,पहिला चाहिँ रहरले ब्लग लेख्न मन लाग्थ्यो । अहिले केही नयाँ सिर्जना जसले अरुलाई ज्ञान दिन्छ त्यो कुरा लेख्न मन लाग्छ । मैले देखेको कुरा अरुलाई देखाउन मन लाग्छ । खास गरि मैले मेरो ब्लगमा मेरा रचनाहरुलाई राख्ने विचार गरेको थिएँ । तर अहिले मलाई समाजका विभिन्न समसामयिक विषयहरुलाई पनि राख्न मन लागेको छ ।
तपाईंको ब्लगमा के कस्ता बिषयबस्तु समावेश हुन्छन ?
मेरो ब्लगमा कथा, कविता र टुक्काहरु राखेको छु । अनि ती सबै रचनालाई मेरो आवाजमा आफैले प्रस्तुत अर्थात् बाचन पनि गरेको छु । केही मसंग सम्बन्धित छन् भने केहि चाहीँ अन्य सामाजिक विषयसँग सम्बन्धित छन् । केही जानकारीमुलक पाना पनि छन् जस्तै : नेपालका विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स पसलका ठेगानाहरु । आगामी दिनहरुमा यसलाई नै निरन्तरता दिन्छु ।
तपाईंको ब्लगमा धेरै कुराहरु समावेश भएको रहेछ ? आफ्नो ब्लगको बारेमा बिस्तृत रुपमा बताइदिनुस न ?
मेरो ब्लगमा मेरा रचना मेरो आवाजमा सुन्न सक्नुहुनेछ । अपडेटेड लोडसेडिंगको तालिका तथा नेपालका विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सपको ठेगाना प्राप्त गर्न सक्नु हुन्छ ।आगामी दिनमा अन्य कुरा पनि थप्ने प्रयास गर्नेछु ।
पछील्लो पटक कुन बिषयमा के लेख लेख्नुभयो ? के कुराले लेख्न अभिप्रेरित गर्यो ?
पछिल्लो पटक मैले एउटा कथा प्रस्तुत गरेको थिएँ । जुन सोसिअल मिडियाले पारेको असर र उमेरको बारेमा थियो । मलाई यो कथा लेख्नको लागि मैले इन्टरनेट चलाएको अनुभव र साना नानीहरुले सोसल मिडियामा साथीहरुलाई चाँडै नै विश्वास गरेको देखेर उत्प्रेरित गरेको हो ।
तपाईंको ब्लगको ट्राफिक कस्तो छ र ब्लगमा पाठकहरुबाट कस्तो प्रतिकिया पाई रहनु भएको छ ?
म भर्खरको ब्लगर भएकोले त्यती धेरै त छैन । प्रतिक्रिया हेर्दा केहिले मन पराएको देखिन्छ, ठिकै छ जस्तो लाग्छ ।
नेपाली ब्लग क्षेत्रलाइ कसरी नियाल्नुभएको छ ? तपाईंको बिचारमा नेपालमा ब्लग क्षेत्रको भविष्य कस्तो छ ?
नेपालमा पनि इन्टरनेट प्रयोगकर्ता धेरै भैसकेको अवस्थामा धेरैले रमाइला तथा रोचक अनि ज्ञानबर्दक ब्लगहरु बनाउनु भएको छ । उहाँहरुको ब्लगको प्रतिक्रिया हेर्दा भविष्य धेरै राम्रो छ जस्तो लाग्छ।
हामीकहाँ केही युवा ब्लगरहरूले ब्लगिङ्लाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि बनाएका छन, तपाइलाइ के लाग्छ, ब्लगिङमा आचारसंहिताको जरुरी छ र किन?
मेरो विचारमा स्वतन्त्रता जरुरी छ तर समाजमा अपच हुनु भएन । यो अचारसंहिताले पक्कै पनि झन् मर्यादित बनाउँछ तर ब्लगमा अचारसंहिता नै चाहिन्छ भन्ने चाँहि नहोला । यो क्षेत्रलाई अचारसंहिता बिना नै मर्यादित बनाउन पनि सकिएला ।
अन्त्यमा मेरो रिपोर्टलाइ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
अन्तमा मेरोरिपोर्टलाई आगामी दिनको लागि शुभकामना र अझ धेरै फिचरहरु थप्नको लागि सुझाव। मेरोरिपोर्टले पक्कै पनि राम्रो काम गरेको कुरा पनि भन्न चाहन्छु र धन्यवाद ।
रमेशको ब्लगः http://rkhatri.com.np/
नोट: के तपाइं पनि ब्लगिङ गर्नुहुन्छ? यदि गर्नुहुन्छ भने तपाइं पनि यो स्तम्भमा फिचर हुन सक्नुहुन्छ । कृपया आफ्नो ब्लग लिङ्क हामीलाइ पठाउनुहोस् । वा आफ्नो ब्लगको विवरण cj@meroreport.net मा इमेल गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ । तपाइंको ब्लग हेरेर हामीले निर्णय गर्नेछौं ।
मेरोरिपोर्टमा हालसम्म फिचर हुन सफल साताका ब्लगरहरु:
K P Dhungana
Uma Thapa Magar
Shanti Bikram Gautam
Comment by ramesh khatri on February 24, 2012 at 9:17am
Comment by Kranti Darai on February 23, 2012 at 3:11pm
Congratulations Ramesh jee
Comment by Smriti Khatri on February 22, 2012 at 7:20pm
Comment by Indra Dhoj Kshetri on February 22, 2012 at 4:54pm
Congratulations Rameshji. We feel pleased to recognize the emerging blogger like you in this column. We hope and wish you will continue writing and expressing yourself while letting the world read your thoughts.
Comment by Ajeeta Sigdel on February 22, 2012 at 4:37pm